Ajụjụ - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta emelitere emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma. Anyị na-enye gị nkwado ọnụahịa asọmpi.
Mba, anyị enweghị usoro opekata mpe.
N'agbanyeghị ole ole, anyị ga-enye gị nkwado ndị ọrụaka.
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere protocol nkwukọrịta, akwụkwọ nhazi, iji ndu.
Anyị na-akwado teknụzụ anyị, akụrụngwa na usoro mmepụta. Nkwa anyị bụ maka afọ ojuju anyị na ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Ngwunye ọkachamara na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ịnweta ụgwọ ọzọ.